OpenSourceCoin စျေး - အွန်လိုင်း OSC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို OpenSourceCoin (OSC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ OpenSourceCoin (OSC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ OpenSourceCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $123 502 440.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ OpenSourceCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
OpenSourceCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
OpenSourceCoinOSC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00248OpenSourceCoinOSC သို့ ယူရိုEUR€0.00209OpenSourceCoinOSC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00189OpenSourceCoinOSC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00226OpenSourceCoinOSC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0222OpenSourceCoinOSC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0155OpenSourceCoinOSC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.055OpenSourceCoinOSC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00922OpenSourceCoinOSC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0033OpenSourceCoinOSC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00343OpenSourceCoinOSC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0555OpenSourceCoinOSC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0192OpenSourceCoinOSC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0132OpenSourceCoinOSC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.186OpenSourceCoinOSC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.418OpenSourceCoinOSC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00339OpenSourceCoinOSC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00371OpenSourceCoinOSC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.077OpenSourceCoinOSC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0172OpenSourceCoinOSC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.262OpenSourceCoinOSC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2.94OpenSourceCoinOSC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.939OpenSourceCoinOSC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.181OpenSourceCoinOSC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0687
OpenSourceCoinOSC သို့ BitcoinBTC0.0000002 OpenSourceCoinOSC သို့ EthereumETH0.000006 OpenSourceCoinOSC သို့ LitecoinLTC0.00004 OpenSourceCoinOSC သို့ DigitalCashDASH0.00002 OpenSourceCoinOSC သို့ MoneroXMR0.00003 OpenSourceCoinOSC သို့ NxtNXT0.18 OpenSourceCoinOSC သို့ Ethereum ClassicETC0.000349 OpenSourceCoinOSC သို့ DogecoinDOGE0.698 OpenSourceCoinOSC သို့ ZCashZEC0.00003 OpenSourceCoinOSC သို့ BitsharesBTS0.095 OpenSourceCoinOSC သို့ DigiByteDGB0.0901 OpenSourceCoinOSC သို့ RippleXRP0.00815 OpenSourceCoinOSC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00008 OpenSourceCoinOSC သို့ PeerCoinPPC0.00876 OpenSourceCoinOSC သို့ CraigsCoinCRAIG1.11 OpenSourceCoinOSC သို့ BitstakeXBS0.103 OpenSourceCoinOSC သို့ PayCoinXPY0.0423 OpenSourceCoinOSC သို့ ProsperCoinPRC0.304 OpenSourceCoinOSC သို့ YbCoinYBC0.000001 OpenSourceCoinOSC သို့ DarkKushDANK0.778 OpenSourceCoinOSC သို့ GiveCoinGIVE5.25 OpenSourceCoinOSC သို့ KoboCoinKOBO0.543 OpenSourceCoinOSC သို့ DarkTokenDT0.00228 OpenSourceCoinOSC သို့ CETUS CoinCETI7
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 00:20:02 +0000.